မြည်းကြိုးကိုဖြည် 90s ပန်းဒင်ဗာမြို့မှခြုံငုံ | Buddhatrends
$83.30 $98.00 သငျသညျ (15% Save$14.70)
တစ်ဦးက *** T က
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! суууупееееррр jumpsuit !!!!!! အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း! 48-50 အရွယ်အစားတွင်ပြီးပြည့်စုံ !!!!
B က *** ဎ
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ Dungarees ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့အပေါင်းအရွယ်အစားရှိပါတယ်။ တစ်ဦးကအကြှနျုပျအဘို့ကြီးတွေနည်းနည်း, ဒါပေမယ့်ငါ t ကြောင်းစိတ်ထဲ Don ။ ငါ 1.76m နှင့် 68 ကီလိုဂရမ်ဖြစ်၏။ ဓာတုအနံ့အနည်းငယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်တခါကပျောက်ကွယ်သွားလျှော်ကြ၏။ အားလုံးအားလုံးတစ်ကယ့်ကိုအကောင်းဝယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အရည်အသွေးကောင်းပါးလွှာဝါဂွမ်းဂျင်းဘောင်းဘီတစ်နည်းနည်းလမ်းပိုင်း။ အားလုံးမျှော်လင့်ချက်များစံချိန်။ သြစတြီးယား 1mesyats မှပေးပို့။ သငျသညျရောင်းချသူကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဆိုပါဂျင်းဘောင်းဘီကအရမ်းပျော့နှင့်သာယာသောဖြစ်ပါတယ်။ အရောင်များကိုအကြီးအခြောက်ချားကြည့်ရှုပါ။ တစ်ဦးကအကြှနျုပျ၏ oppinion အတွက်ကြီးမားသောအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း ok ဖြစ်ပါတယ်။ ခလုတ်ပလပ်စတစ်မှ ...
ပင်ပိုကောင်း, ရုပ်ပုံ၌ရှိသကဲ့သို့, အားလုံး ok
L ကို *** ဌ
class !!! ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ
B က *** ဦး
အအေး Kombez! ပါးလွှာသောဂျင်းဘောင်းဘီ။ ကျွန်တော်ပျော်တယ်)
Delivery အစာရှောင်ခြင်း, အရညျအသှေးမယ့်စူပါဖြစ်ပါသည်
ရိုးရှင်းစွာစူပါဝတ်စုံ။ အဆင်ပြေသက်သာ။ ဒဏ်ငွေချုပ်ပေးခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော်ပျော်တယ်
Samara မှသုံးပတ်, အရည်အသွေး, အဘယ်သူမျှချည်စူပါဖြစ်ပါသည်, အဘယ်သူမျှမအနံ့တစ်ခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပုံစံ, ဖြောင့်လိုင်းများ, ဂျင်းထည်မျှလက်ထပ်ထိမ်းမြားရှိ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့, စတိုင်, နွေရာသီ, ဿုံထိုင်တော်မူ၏။ ကျွန်မအကြံပြုနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ရောင်းချသူ !!! စတိုင်အမြိုးသမီးမြားအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန် !!
F ကို *** တစ်ဦး
အဆမတန်ကြီးမားရှည်လျားသော Hippie စားဆင်ယင် $75.65 $89.00
Plus အားအရွယ်အစားအဆမတန်ကြီးမားအင်္ကျီ Dress $51.00 $60.00
အနုပညာရှင်ရဲ့ Way ကို Abstract Dress $102.85 $121.00
မြည်းကြိုးကိုဖြည် Sleeveless Maxi Dress $75.65 $89.00
ပန်းပွင့်ကို Power Maxi Dress $64.60 $76.00